Ilaina ve ny fikarakarana vatana, ho an’ny vehivavy? – Blaogin'i Voniary
Volana maromaro lasa izay dia notantaraina tamintsika teto ny momba ilay mpanjaka siberiana sy ireo vadiny efatra. Voasongadina tamin’izany fa mety kokoa raha omena laharam-pahamehana ny zavatra manan-danja dia ny fanahy. Kanefa, tsy vongam-panahy fotsiny isika fa vatana sy nofo aman-dra ihany koa. Ilaina izany ny mikarakara ny vatana satria io no lapa entintsika mivahiny ety an-tany. Anio àry, aroso amintsika ny antsafa niarahana tamin’andriambavilanitra iray eo amin’ny sehatry ny Zumba: Hanitra Razafindramanana. Ho hitantsika ao ny antony ilana ny fikarakarana vatana sy ny fomba atao amin’izany eo amin’ny vehivavy.
Miray Lalaina : Inona avy no tsiambaratelonao raha resaka fikarakarana vatana ?
Hanitra Razafindramanana: Ny zavatra voalohany ataoko amin’ny maha-mpanazatra ahy, dia resaka fanatanjahantena no hikarakarako ny vatako: im-17 ao anatin’ny herinandro aho no manao izany (Zumba, CAF, fitness). Tsy voatery ho toy izay daholo nefa ho an’ny olon-tsotra.
Tsy ny vatana ihany no voakolokolo fa ny saina ihany koa. Rehefa ny saina no mety, miala sorisory dia mandeha ho azy ny vatanao: miramirana, mavitrika, mahakarakara vatana. Lasa mazoto misotro rano be sady manala ny zavatra ratsy ao anaty ny fanaovana fanatanjahantena. Misy fiantraikany amin’ny bika ihany koa izy io.Tsy voatery ny mahia no tsara fa ny antonony. Rehefa mety araka izay tadiavinao ny bikanao dia marisika hihaingo sy hividy izay akanjo mahafinaritra anao ianao.
« Marisika hihaingo sy hividy izay akanjo mahafinaritra anao »
cc : Hanitra Razafindramanana
ML: Azonao zaraina ve ny tsiambaratelo amin’ny resaka sakafo ? (tsiky)
HR: Mihinana ny zavatra rehetra aho fa lanjalanjaiko: izany hoe tsy mihinana siramamy, menaka, sy sira be loatra. Ny zavatra rehetra raha vao mihoatra ny ilaina azy dia miteraka voka-dratsy: diabeta, tosi-dra, menaka ratsy ho an’ny fahasalamana.
Mazotoa ihany koa misotro rano fa ho ahy manokana indrindra dia mihinana zava-maitso, anana, sy voankazo. Manampy betsaka amin’ny fandevonan-kanina ireny.
ML: Inona ny hafatr’i Hanitra ho an’ny mpamaky blaogy, indrindra ny vehivavy ?
HR: Mamirampiratra sy mahafinaritra ny fahatanorana. Ny hafatro dia ny hoe mahaiza miaina. Aza manao zavatra mihoatra ny fefy na amin’ny lafiny sakafo na ny fomba fiaina. Hiaino amin’izay mahafinaritra anao ny fiainanao, karakarao ny tenanao.
Aza kivy, ny tsy tomombana sy ny alahelo tsy maintsy misy amin’ny fiainana. Tsy ho teneniko eto ny taonako, fa efa niaina zavatra be dia be aho (mihomehy) dia hitako hoe mila lanjalanjaina ny zavatra rehetra.
Mila hiainana tsara ny faha 20, faha 30 sy faha 50 taonanao fa lalana tsy maintsy ho diavina ireo. Samy manana ny maha samihafa azy.
Ary farany dia hoe mazotoa mivavaka!
fanatanjahantena, fikarakarana ny fanahy, fikarakarana vatana, fikolokoloana vatana, Hanitra Razafindramanana, Zumba
Dominique Ramarlah: “Na dia monina eto Frantsa aza izahay efa-mianaka dia tsy manadino ny maha-malagasy “
Un commentaire sur “Ilaina ve ny fikarakarana vatana, ho an’ny vehivavy?”
10 février 2021 à 9 h 10 min
Miarahaba ary mankasitraka amin’ny fizarana dia tena voaporofon’ny sary tokoa fa vehivavy mahakaraakara vatana tokoa ianao, na endrika, na habe…. Hoy ianao hoe:Rehefa mety araka izay tadiavinao ny bikanao dia marisika hihaingo sy hividy izay akanjo mahafinaritra anao ianao. » Tena marina izany fa nisy fotoana aho mihevi-tena ho lehibe dia toa tsy mety izay anaovana rehetra. Ramatoa Nirinasoa